UkuThengiswa kweMidlalo yeMidlalo ngokuShukumiseka, iZona zifundo ziBalaseleyo kubaSebenzisi | Martech Zone
Iminyaka elishumi kwaye ii-smartphones zithathe ngokufanelekileyo. Idatha ibonisa ukuba ngo-2018, kuyakubakho i-2.53 yezigidigidi abasebenzisi be-smartphone kwihlabathi liphela. Umsebenzisi ophakathi ineeapps ezingama-27 kwisixhobo sabo.
Amashishini asika njani kwingxolo xa kukho ukhuphiswano olungaka? Impendulo ilele kwindlela ekhokelwa yidatha kwintengiso yeapps kunye nokuqonda okufundwayo kubathengisi abahambahambayo abayibulala kwiindawo zabo.
Icandelo lokudlala, ngoku elithengisayo elihamba ngemarike lirekhoda impumelelo engakholelekiyo. Enkosi kwinkqubela phambili yokugubungela kunye nokuphuculwa kokunxibelelana kweselfowuni, uhlalutyo lwedatha, i-UX kunye nentengiso yeselfowuni, Ingeniso yemidlalo yehlabathi ibethe i-91 yezigidigidi zeedola ekupheleni kuka-2016. Abaqhubi bemidlalo yokudlala bayazi ukuba ukufunyanwa kubalulekile, kodwa uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa lusetyenziselwa bhetele kwimikhankaso yokugcinwa kweselfowuni. Banikela ngakumbi ngebhanti yakho. Ingxelo yethu eshukumayo yeGaming Insights ichaza ezinye zeendlela eziphambili zokuphucula ukugcinwa kweselfowuni.
Khuphela ikopi yakho Apha
Iinkampani zokudlala zijolisa kwiimodeli ezithile zokufumana iselfowuni, iihambo zabathengi ezinamandla, ezibangela ukuba zisekwe kwimisebenzi yomdlali kunye nokuzenzekelayo kweenkqubo ezichaphazelekayo. Ukubheja kunye nabaqhubi bezemidlalo bayazi kuphela ukusebenzisa ezona ndlela zilungileyo zabadlali babo kumaxesha abo amkelekileyo. Ukusuka kwi-in-app yokutyhala izaziso, ezibangela ukuzimela, abaqhubi be-iGaming bayaphumelela kwimfazwe ehambayo.
Kwi-Element Wave sisebenza nabanye babadlali ababheja kakhulu nabadlala umdlalo eYurophu. Sihambise imiyalezo yesiqingatha sezigidigidi yentengiso yeselfowuni kwaye sahlalutya iminyhadala yenkqubo. Isikhokelo sethu se-iGaming Insights esisimahla siyafumaneka simahla kubathengisi abahambahambayo ukuze bafunde kubo.
Isikhokelo se-iGaming Insights
Isikhokelo sithatha ukujongwa okunzulu ngexesha lokwenyani kunye nokuziphatha komdlalo wangaphambi komdlalo kwiiapps. Indlela eqhutywa yidatha ekuzimeleni ngokusekwe kukuziphatha komdlali inikezela ngamava eselfowuni.
Ingxelo yethu ijolise kwiziphumo ezivela kumawakawaka emiyalezo yangaphakathi nohlelo, ukutyhala izaziso kunye nokuziphatha komdlali kwiincwadi zezemidlalo nakwikhasino.
Idatha ibonisa imeko ecacileyo kunye neziphumo eziqikelelweyo kuhambo lokubhalisa. Ngamanye amaxesha inkqubo yobhaliso kwiselfowuni inqabile okanye inzima. Kungangumceli mngeni kubadlali ukuba bagqibezele. Ingxelo yethu icacisa inani labadlali abagqibe ubhaliso emva koko baphithizele, neengcebiso zokuzikhusela.
Umsebenzi womdlali kunye namazinga ebango ebhonasi anika uphawu olucacileyo lwempumelelo okanye ukusilela kweenzame zokuthengisa ezihambayo. Ukwazi ukuba abasebenzisi bakho bayishiya nini kwaye apho inkqubo inceda ukulungelelanisa isicwangciso sakho sokwenza ukuba isebenze ngcono.
Ixesha elilungile yimbumbulu yesilivere ye-iGaming kwaye sicebisa ukuba yinto nje yexesha, ngaphambi kokuba ibe ngumgangatho wazo zonke ii-verticals. Izinto zexesha lokwenyani ezisekwe kwinto eyenziwa ngumsebenzisi ngoku, umyalezo wexesha lokwenyani kunye nohlalutyo lwexesha lokwenyani zikhokelela ekwandeni kokuzibandakanya kunye nokugcina. Njengokuhlolwa koluntu kunye nokwesibini, kukho unxibelelwano olukhona phakathi kokubheja kunye nabaqhubi bemidlalo kunye neeapps enkosi kubume bexesha lokwenyani lezemidlalo. Kunokuthethwa okufanayo kuzo zonke ii-verticals.
Ukuvela kwee-smartphones kuthetha ukuba abaqhubi be-iGaming baneenguqu ezininzi ekufuneka bezenzile. Apho kanye xa abadlali baya kwindawo yokubhukisha, ngoku banokubheja ukusuka kwisitulo esinamavili, ebharini bebukele umdlalo, kuhambo lwabo okanye kwigumbi lokuhlambela! Ububanzi bedatha ngoku bukhoyo-obuzisa ingqondo: ukusuka kwindawo, ulwimi kunye nenqanaba lesixhobo, ukuya kwimbali yokubheja, usetyenziso lomsitho weapp, kunye nokukhetha ukungcakaza. Eli nqanaba ledatha kunye nokusetyenziswa kwale datha kunika abaqhubi be-iGaming umda ngaphezulu kwamashishini amaninzi kwezinye nkqo.
Malunga ne-Element Wave
Element Wave yakha ukuthengisa okuzenzekelayo ngexesha lokubheja kwezemidlalo, ukwandisa intengiselwano yokudlala ngokuhamba ukuya kuthi ga kwi-10X. Isekwe eGalway, iIreland Element Wave ibonelela ngetekhnoloji yesizukulwana esilandelayo kunye neenkonzo ezilawulwa ziingcali kumashishini okubheja nawokudlala.
tags: zokusebenza yekhasinoUkuhambaamaza elementiqhekezaukungcakazaumdlaloabadlaliimidlalomidlaloindawomyalezoungcakazo mobileimidlalo mobileimidlalo yokudlala eshukumayoIisoftware zokudlalaUkuqonda imidlalo yokudlalaIsikhokelo sokuqonda okuhamba ngeselfowuniumyalezo ophathwayoukugembula onlineumdlaliIxesha elilungileukungcakaza kwezemidlaloezemidlalo zokungcakaza zokusebenza
I-inMotionNow iphehlelela ukuKhangela ukuSebenza okuKwi-Intanethi kwii-imeyile zokuThengisa